Syswall inesimba firewall ye system mafoni | Linux Vakapindwa muropa
Syswall chiitiko chitsva chakanangana nekugadzira fanano yemasimba ekudzivirira moto kusefa kuwanikwa kweanoshandisa maitiro kufona. Iyo kodhi yeprojekiti yakanyorwa mumutauro weRust, rezinesi haritaurwe.
Ichi chiitiko chitsva inotaridzika senge inowirirana vhezheni yesimbi inoshandiswa uye inokutendera kuti uteedzere kwese system yekufona inoitwa nechirongwa. Musiyano wakakosha ndewekuti, mukuwedzera pakuratidza ruzivo nezve iyo mafoni kufona uye mhedzisiro yekuurayiwa kwavo.
1 Nezve Syswall
1.1 Maitiro ega ega anogona kuve neyakagadziriswa faira
1.2 Mhando dzekiyi
1.3 Pachine zvimwe zvekuvandudza
syswall inotsigira inowirirana mode umo maitiro anoongororwa anomiswa usati waita system yekufona uye mushandisi anokumbirwa kuti aenderere mberi kana kufuratira mashandiro acho (semuenzaniso, unogona kuongorora kuyedza kuvhura yega yega faira kana network yekubatanidza maitiro).
Syswall inogona zvakare kuunganidza manhamba pane iyo system yekufona yakaitwa uye kugadzira mushumo zvichibva pairi.
Zvinangwa zve syswall zvinotevera:
Para ipa yakagadziridzwa vhezheni yetambo izvo zviri nyore kuona kuti ndeipi software iri kunyatso kuita.
Ipa nharaunda yekuyedza uye kuyedza neiyo software nekutendera yakadzama uye yekudyidzana nzira yekubvumira uye kuramba masisitimu mafoni.
Maitiro ega ega anogona kuve neyakagadziriswa faira
Yese yega maitiro, se inogona kubatanidza yekumisikidza faira ine runyorwa rwezvibvumidzwa zvakajeka kana yakavharidzirwa sisitimu mafoni.
Kune mafoni akatsigirwa, syswall inobvumira mushandisi kuita zvinotevera zviito:
Rega syscall kamwe
Nguva dzose tendera iyo chaiyo syscall
Bvisa syscall kamwe (yakaoma kana yakapfava)
Gara uchivharira iyo chaiyo syscall (yakaoma kana yakapfava)
Kana ichivharira, chirongwa ichi chinogona kuita block (yakaoma kana yakapfava).
Pakati pechikamu chekudyidzana, zvinokwanisika kubvumidza kana kuvharidzira chaiyo sisitimu yekufona panguva yekumhanya uye chero mafoni kune ino sisitimu kufona, zvisinei kuti chirongwa ichi chinowanikwa kupi.
Kuvharira kunotsigirwa mu "zvakaoma" uye "zvakapfava" modes.
Muchiitiko chekutanga, iyo system yekufona haina kuitiswa uye yekuwana yekukanganisa kodhi inotumirwa kuita. Mune yechipiri kesi, iyo system yekufona nayo haina kuitiswa, asi maitiro acho anogamuchira yekunyepedzera yakabudirira kodhi yekudzosa, kuenzanisa kubudirira kweiyo system yekufona.
Semuenzaniso, panguva ino, chete sisitimu yekufona kuongororwa inoenderana nebasa refaira inotsigirwa.
Iyo yakaoma block inodzivirira iyo syscall kuitisa uye inodzosera mvumo yakarambwa kukanganisa kune maitiro emwana. Kune rimwe divi, rakapfava kiyi inodzivirira iyo syscall, asi ichiedza kudzosa mhinduro yakakodzera kune maitiro emwana kunyepedzera kuti iyo syscall yakaurayiwa chaizvo.
Mune ino kesi, yekusimbisa zvikumbiro zvinoratidzwa chete kana ivo vachinongedzera kune yakanyanya kufona kana yaimbove isipo system system.
Sevha uye kurodha maitiro ekugadzirisa.
Sarudzo dzakaitwa panguva yekuurayiwa dzinogona kuchengetwa kune faira reJSON. Iyi faira inogona kutakurwa panguva yekumhanya kuitira kuti sarudzo dziri pamusoro dzi shandiswa.
Iri ibasa riri kuenderera - mhinduro dzakabvumidzwa / dzakadzivirirwa dzinogara dzichichengetwa.
Kana danho remwana rapera, syswall ichaburitsa mushumo mupfupi pamafambiro ehurongwa hwemwana. Parizvino, inoumbwa nemafaira akavhurwa kana akavharwa, asi ichawedzerwa mukuburitswa mune ramangwana.
Iyo purojekiti ichiri mudanho reiyo inoshanda prototype uye haazi ese mikana akaumbwa akawanikwa.
Pachine zvimwe zvekuvandudza
Iko kune yakakura yekuita-rondedzero yeiyo purojekiti, mune ramangwana zvakarongerwa kuwedzera tsigiro yemamwe makirasi ehurongwa kufona, lkugona kuongorora, uchifunga nezvekupokana kwakapfuudzwa kune yekufona sisitimu, nzira dzekuchengetedza mamiriro ezvinhu kune faira rekufananidza kwazvino chiitiko panguva dzakasiyana dzekutangisa (semuenzaniso, kuenzanisa zvinyorwa zvemafaira nekubatana kwenetiweki), sarudzo kufuratira mutoro unosimba maraibhurari uye kutsigira yakajairwa seti yezvirongedzero (semuenzaniso, kiya zvigadziko zvese, asi tendera faira kuwana).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Syswall inesimba firewall ye system mafoni